Maitiro Ekutarisira Kusvuta uye Fodya Kuchiva - 802Quits
Vermonters KUGARA Maitiro Ekutarisira Kushuva
NZIRA DZOKUGADZISA ZVINODA
Inotora kwenguva yakareba sei nicotine? Mavhiki maviri ekutanga ndiwo akaomesesa. Kugadzirira kupedza kuburikidza nekushandisa yako yakagadzirirwa kurega chirongwa, rubatsiro kubva kuna chiremba wako, rwakawedzerwa rutsigiro kubva ku802Quits foni kana mu-munhu Kurega Kochi uye yako yekutsigira network ichave yakakosha pakubudirira kwako. Yese yekurega chiitiko inonzwa zvakasiyana; zvichaomera vamwe vanhu kupfuura vamwe. Kana iwe wakamboedza imwe nzira munguva yakapfuura uye ikasashanda, funga kuyedza imwe. Kuedza kwese kunovaka pane zvawakadzidza uye kunokuswededza padhuze nekubudirira.
Kuva Fodya Yemahara
Iwe uchaita sei pazuva rako rekurega? Uchasvetuka kubva pamubhedha here, uine shungu dzekutanga hupenyu hwako husina fodya? Kana kuti iwe uchahwanda here pasi pezvivharo uchitarisira kuti zano rekurega raingova kurota? Chero nzira, tanga kudada nekuziva kuti paunomuka paZuva rako reKusiya, iwe zvino wave pamutemo fodya.
Iwe unogona kunge uchishamisika kuti ungarega sei kushuva midzanga uye zvimwe zvigadzirwa zvefodya. Heano mamwe matipi ekugadzirisa fodya uye e-fodya zvishuwo uye zvimwe zvishuwo zvefodya.
PaZuva rako reKusiya, iwe uchazoda kuongorora nekukurumidza kuti uve nechokwadi chekuti fodya yako yaenda. Wobva watanga zuva rako nekuenda pamusoro pezvikonzero zvekurega. Imwe pfungwa yakanaka kuisa pamwechete "bhegi rekushushikana mupfungwa." Mariri, unogona kuisa zvihwitsi zvakaoma, mindi, kunwa mashanga kana kofi zvinomutsa, bhora rekushushikana kana chimwewo chinhu kuti maoko ako arambe akabatikana, pikicha yemudiwa kana chipfuwo kana katsamba kubva kumwana kana kubva kwauri kuti urambe uchienda pese paunowana izvo zvishuwo.
Funga nezve nzvimbo dzaunowanzo svira, kutsenga kana vape. Kana iwe uchikwanisa kuzvidzivirira kana uchinge warega, zvinobatsira kukuchengetedza kubva pakuedzwa uye kubatsira kubata mudzanga, e-mudzanga kana zvimwe zvishuwo zvefodya.
Chinhu chakakosha kuita kuita zvirongwa zvawakagadzirira zuva rino, rinotevera uye kwenguva yakareba sezvaunoda kusvikira chishuwo chekushandisa fodya chiri nyore kubata. Iwe unoziva iyo nguva nemamiriro ezvinhu anoita kuti iwe ude kushandisa fodya, asi kutanga izvozvi iwe unogona kuisa yako yakagadzirirwa yakagadzirirwa kurega kuronga munzvimbo kuti upfuure nenguva idzodzo. Kunyangwe uchinzwa zvirinani - kufema kuri nyore uye kuva nesimba rakawanda - kuchizoitika mukati memazuva mashoma, zvinogona kutora kusvika kumwedzi mitanhatu kuti unzwe usina fodya. Muchokwadi, kusave nefodya pamwedzi mitanhatu idanho rekuramba kurega.
Maitiro ekuita zvinhu zvaungaite zvinokubatsira kudzora zvishuwo. Iko hakuna nzira yekuziva pamberi penguva iyo inokushandira iwe, saka zvakanakisa kuve nemazhinji sarudzo. Unogona kuona kuti vamwe vanoshanda zvirinani pane vamwe mune mamwe mamiriro. Nzira chete yekuziva zvechokwadi ndeyekuedza ivo.
Pane mitemo mitatu yakapfava yekutevera kana uchinhonga nzira dzekuita:
1.Zvinofanira kuve nyore kuita. Izvo zviri nyore zvazviri, zvakanyanya mukana wekuzviita.
2.Inofanira kunge iri chimwe chinhu chinofadza. Kana zvisingafadzi, mikana iwe hauzodi kuzviita!
3.Chiito chaunosarudza chinofanira kumira kana kuti zvishoma kuderedza kuda kwako. Kana ikasaderedza kushuva kwako fodya kana e-mudzanga, kutsenga fodya, fodya kana vape, unofanirwa kutsvaga chimwe chinhu chingade.
Mienzaniso yezviito zvekuyedza kuyedza:
Dzidzira 4Ds. Tora mweya wakadzika kana 2. DZIMWA girazi remvura. Ita chimwe chinhu. NONOKA kwemaminitsi gumi.
Batana nevamwe vanorega vanoziva zvauri kupfuura nazvo.
Zvivhiringidze kusvikira kuda kwapfuura. Zvakawanda zvishuwo zvinongogara chete 3-5 maminetsi. Chii chaunofarira kwenguva iyoyo? Kufunga nezvemari yauri kuchengetedza uye zvaunogona kutenga? Kutora kufamba? Kuona yaunofarira YouTube vhidhiyo? Ona pazasi kuti uwane mamwe mazano.
Kana iwe uchikwanisa kupfuura kuburikidza neiyo nicotine yekusiya kuda nekuzvitsausa pachako, iwe uri nhanho imwe padhuze nekusvika kune chako chinangwa. Paunofunga nezvekusiya seimwe yemaminetsi mashanu-kubudirira pane imwe nguva, zvinogona kunzwa zviri nyore kuita.
Delete ako ekare mameseji mameseji kana kugadzirisa yako foni kero kero.
Delete ekare maemail kubva pakombuta yako kana foni.
Chinja hembe yako kana bhutsu. Ichi chiito chidiki chinogona kukubatsira iwe kugadzirisa zvakare uye unzwe zvirinani.
Takura ping pong bhora uye bhendi rerabha. Zvinonzwika kunge zvakapusa, asi kuyedza kuputira iro rabha bhendi kutenderera ping pong bhora hazvisi nyore sezvazvinonzwika, uye zvinokuchengetedza iwe kubatikana kudzamara chishuwo chapfuura.
Famba-famba pauriri kana chivakwa kana uri pabasa-funga nezvazvo sepaburi risingaputi.
Tora mota kugezesa mota kana kupukuta zvemukati.
Bhura uye floss mazino ako. Izvo zvinobatsira kubvisa pfungwa dzako pane chishuwo, uye iwe unenge uine mweya mutsva zvakare!
Funga nezve inguva shanu dzenziyo dzine mazita evanhu mavari.
Tora sunflower mbeu snack break -kushanda kuburikidza neaya makobvu kunogona kunetsa uye nzira ine hutano yekushandisa maminetsi mashanu.
Menya orenji kunyangwe iwe uchinzwa senge kuidya. Zvinotora maminetsi mashanu kungobvisa zvese izvo chena zvinhu.
Kana kushuva kukarova, enda kuimba yekugezera, geza maoko uye uzvitarise mugirazi. Panguva yaunenge wagadzirira zororo remudzanga, kuda kwacho kunenge kwaenda.
Tamba nechavhiringidza putty kana dombo rekushushikana kuti uchengete maoko ako akabatikana iwe uchinge uchishanda kuburikidza nekuchiva.
Tora kufamba nekukurumidza uye uverenge nhanho dzako munzira, uye ona kana uchigona kuita zvishoma zvishoma zuva rega rega.
Chenesa zvakapoteredza imba kana kugadzirisa kabati. Bhonasi: hapana fodya uye imba nyowani, isina gwapa.
Tamba solitaire kana mumwe mutambo kana iwe uri pakombuta, asi kwete kana nzvimbo yako yebasa isingatenderi!
Dzidzira 4Ds… Kufema DEEPLY. Inwa girazi remvura. Ita chimwe chinhu. NONOKA kwemaminitsi gumi.
Kuuya neyako runyorwa rwezvinokanganisa uye matipi ekugadzirisa zvishuwo, funga nezvenguva dzezuva apo iwe unoshuvira mudzanga kana e-mudzanga, kutsenga fodya, fodya kana kuputa zvakanyanya uye kuenzanisa kumusoro. Semuenzaniso, kana iwe uchigara uchivheneka mumotokari, vhura radio pane uye uimbe pamwe nerwiyo. Nziyo zhinji maminetsi matatu kusvika mashanu. Paunenge wapedza, kuda kwako kunofanira kunge kwaenda.
Unoda kukanganisa here?
Sarudza maviri emahara ekusiya maturusi uye isu tinokutumira iwo kwauri!
Mahara Regedza Zvishandiso>